Laacibka Kooxda Arsenal ee Dani Ceballos oo diiddan inuu dib ugu laabto Real Madrid… (Maxay tahay Sababtu?) – Gool FM
Laacibka Kooxda Arsenal ee Dani Ceballos oo diiddan inuu dib ugu laabto Real Madrid… (Maxay tahay Sababtu?)
(London) 16 Nof 2019. Xiddiga kooxda kubadda cagta Arsenal amaahda kula jooga ee Dani Ceballos ayaa la soo warinayaa inuu diiddan yahay inuu dib ugu laabto naadiga milkiyaddiisa iska leh ee Real Madrid.
Dani Ceballos ayaa lagu soo waramayaa inuusan qorsheyneynin inuu ku laabto Real Madrid xilli ciyaareedka soo socda, iyadoo la sheegayo inuusan tagi doonin inta uu Zinedine Zidane weli mas’uul ka yahay kooxda reer Spain.
Kaliya waxaa loo arkaa inuu qeyb ka yahay qorshaha garoonka Bernabeu, Ceballos ayaana loo ogolaaday inuu heshiis amaah hal xilli ciyaareed ah ugu biiro Kooxda reer England ee Arsenal.
Si kastaba ha ahaatee, Gunners ayaan haysan fursad ay si toos ah ugula wareegi karto heshiis joogto ah oo ay ku heli karaan xiddiga xulka qaranka Spain suuqa xagaaga.
Yeelkeede, sida ay warinayso Jariiradda AS ee ka soo baxda dalka Spain, ciyaaryahan Ceballos ayaan doonaynin inuu ka hoos ciyaaro macallin Zidane, isagoo ka warqaba inaysan u badnayn in la siin doono waqti joogto ah oo uu ugu ciyaaro Kooxda Los Blancos.
23-sano jirkaan ayaa la siiyey sagaal kulan oo uu safka hore ku soo bilowday iyo todobo kulan oo uu kursiga keydka ka soo kacay tartammada oo dhan tan iyo markii uu u soo dhaqaaqay garoonka Emirates oo ay ku dheesho kooxda Gunners.
Ceballos ayaa wali haysta heshiis saddex sanadood iyo bar ah oo kaga harsan qandaraaskiisa kooxda Real Madrid.